कोरियामा ‘ट्रेन’ चढ्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस – Kantipur Press
कोरियामा ‘ट्रेन’ चढ्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस
देश अनुसार हरेक देशका आ-आफ्नै यातायात नियमहरु हुने गर्दछन । हामी जुन देशमा रहन्छौ त्यो देशमा लागू गरिएका नियमहरुको सही ढंगबाट पालना गर्यौं भने कुनैपनि किसिमको समस्या पर्नबाट जोगिन सक्छौ !
यदि तपाई कोरिया मै हुनुहुन्छ भने तपाइलाई यी कुराहरु अबगत नै होला । तर भर्खर कोरिया आउनुभएको छ वा कोरिया आउने तयारीमा जुट्नु भएको छ भने यी कुराहरु तपाईलाई एकदमै काम लाग्ने जानकारी हरु हुन् ।
नेपालमा यातायातको प्रमुख साधन भनेको बस हो, साथै ट्याक्सी, कार वा मोटरसाइकल, साइकल पनि दैनिक उपयोग गरिने यातायातको साधन मध्यमा पर्दछन । तर कोरियाका मुख्य-मुख्य शहरहरुमा यातायातको मुख्य साधन भनेको ट्रेन नै हो । खर्च र सहजता दुबैका हिसाबले उपयोगी भएका कारण नै अधिकांस कोरियनहरु ट्रेनकै यात्रा गर्न रुचाउछन । बिहानको समय काम, स्कुल वा अन्य कारणले यात्रा गर्नेहरुको संख्या धेरै हुने हुँदा यो समय ट्रेनहरु निकै भीड हुने गर्दछन । अाउनुहाेस् कोरियामा ट्रेन चढ्दा ध्यान दिनु पर्ने केही कुराहरुको बारेमा चर्चा गरौं ।
१. हरेक ट्रेनमा अारक्षण सिट हुन्छन
कोरियामा भएका अधिकांस ट्रेनहरुमा वृद्ब बृदा, घाइते व्यक्ति, गर्भवती महिला र साना बच्चा सहितका व्यक्तिहरुका लागि सहज होस् भन्ने हेतुले प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । प्रायगरी ट्रेनका सबै डब्बाहरुमा उनीहरुको लागि अारक्षित सिट राखिएको हुन्छ । यदि तपाई माथि भनिएका भन्दा फरक हुनुहुन्छ भने ती सिटहरुमा नबस्नु होला । अारक्षित सिटमा स्टिकर वा असक्षमता दर्शाउने खालको चिन्ह टाँसिएको हुन्छ वा अरु सामान्य सिटहरुभन्दा फरक रंगका हुन्छन ।
२. फोनमा नबोल्नुहोस्
विशेष गरी कोरियामा सार्बजनिक सवारी जस्तै बस ट्रेनमा यात्रा गर्दा मोबाईल फोनमा कुरा गर्नु असभ्य मानिन्छ। किनकी कोरियनहरु बिभिन्न कुराको सोचाई र अनेकौं कामको ब्यस्थताले गर्दा यात्रामा कुनै किसिमको होहल्ला एवं नजिकै बसेर कसैले फोनमा बोलेको मन पराउँदैनन् ।
३. लाइनमा बस्नुहोस
शिष्टता र सभ्यताको ब्यबहारिक प्रयोग हुने देश कोरियामा जो कसैले पनि अरुको समय र मेहनतको सदैब कदर गर्दछन् । जहाँ जानुहोस्, जता हेर्नुहोस् दुई वा दुई भन्दा बढि ब्यक्तिले एकैठाउँबाट सेवा लिन परेको खण्डमा नियमित रुपमा अनुशासित ढंगले लाईन बसेर आफ्नो पालो कुर्ने गर्दछन् । त्यसमाथि अति ब्यस्त हुने कोरियाको ट्रेनमा पनि त्यो नियम एकदमै अनुशासित भएर पालना गरिएको हुन्छ। त्यसैले ट्रेनमा चढ्दा होस् अथवा झर्दा आफ्नो समयको हतार संगसंगै नैतिक जिम्मेबारी पनि बहन गर्नुहोला ।
कोरियनहरु शान्त स्वाभावका हुन्छन् । ट्रेन भित्र कोहि पढ्दै हुन्छन् त कोहि आफ्नो कार्य योजनाहरु बनाउँदै हुन्छन् भने कोही मोबाईल हेर्दै हुन्छन् । तपाईले हल्ला गर्दिनुभयो भने यात्रुको अनावश्यक ध्यान तपाई प्रति खिचिने र उनीहरुको नजरमा तपाई ‘असभ्य’ को सूचिमा पर्नुहुनेछ। त्यसैले साथीसंग कुराकानी नै गर्न परे पनि हो हल्ला नगरी सभ्य भएर बोलिदिनु नै तपाईको सभ्यताको परिचय हुनेछ।
५. सतर्क रहनुहोस
तपाईं बस्दा छेउछाउको ब्यक्तिलाई पेलिएको पो छ कि? खुट्टा खप्टाएर बस्नु भएको छ भने अगाडी उभिएको मान्छेलाई छोइएको छ या छैन? त्यस्तै आफ्नो झोला आफ्नो छेउको सिट खाली छ भन्दैमा नराख्नु होला । कोरियनहरु यो झोला हटाउनुस् न बस्नु पर्यो भन्दैनन् चुप लागि उभिएर बस्छन् । सामान धेरै भएको खन्डमा आफ्नो सिट माथि झोला या सामान राख्ने ठाउँ हुन्छ त्यही राख्नु होला । अनि ट्रेनमा चढ्दा र झर्दा अरुलाई धक्का नलाग्नेगरी हिड्नुहोला । यस्ता ससाना कुरामा सदैब सतर्क रहनुहोस्।
माथि उल्लेखित कुरा हरु तपाई हामीलाई निकै सामान्य लाग्न सक्छन तर निकै महत्वपुर्ण कुराहरु हुन् ।
यी वाहेक अरु पनि केही छन् कि ट्रेनमा चढ्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु र पालना गर्नुपर्ने नियमहरु ? कृपया आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला।
दक्षिण कोरिया रहनु भएका सम्पूर्णलाई अत्यन्तै महत्वपुर्ण सुचना !
सुर्खेत समाज दक्षिण कोरिया द्वारा कोरिया आएको १७ दिनमै दृघटनामा परि निधन भएका दर्लामी लाई श्रद्दान्जली अर्पण !